Nasiistayaasha oo dhaqdhaqaaqa kordhiyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xubnaha xisbiga Svenskarnas parti oo mudaharaad ka dhigaya magaalada Eskilstuna. Foto: Conny Sillén / TT
Nasiistayaasha oo dhaqdhaqaaqa kordhiyey
La daabacay onsdag 19 mars 2014 kl 09.20
Expo oo ah urur u kuur-gala dhaqdhaqaayada xagjiriinta midigta fog ee Iswiidhen ayaa warbaxin uu maanta ururka soo bandhigey ku sheegey in ay kordhiyeen dhaq dhaqaaqa iyo firfircoonida ururada nasiistayaasha Iswiidhen, sannadkan oo doorashooyin dalka ka dhacayaan.
Expo waxey sheegtey in nasiistayaasha ay gaar ahaan aad u sii kordhiyeen baahinta borobagandadooda.
- Dhaq dhaqaaqa kooxa nasiistayaasha ah sannadkan aad ayey u soo korartey, waxey aad gaar ahaan u kordhiyeen baahinta borobagandadooda iyo dhanbaaladooda, ayey tiri Anna-Sofie Quensel oo ah baare ka tirsan ururka Expo.
Ururka Expo waxuu soo aruuriyey oo isku geeyey dhamaan dhaq dhaqaaqyada ay kooxa kalo gedisan ee nasiistayaasha ah sameeyeeen labadii sanno ee la soo dhaafey.
Sannadkii 2012 xagjiriinta waxey sameeyeen 1824 dhaq dhaqaaqyo – halka sannadkii 2013 ay sameeyeen 2333 dhaq dhaqaaq taas oo ah kobac boqolkii 28.
Labada koox ee ugu waaweyn
Shan sanno horteed Iswiidhen waxaa ka jirey ku dhawaad 40 urur oo nasiistayaal ah laakiin tirada ururadan ayaa soo yaraadey oo ku soo koobmey dhowr urur kaliya. Maantana labada kooxood ee ugu waaweyn nasiistayaasha ayaa ah xisbiga Svenskarnas parti iyo Svenksa Motståndsrörelsen oo ah labo koox oo ay soo badanayaan dadka xubinta ka noqonaya.
– Midaan aragno waxey tahay; kordhitaan weyn, gaar ahaan xisbiga Svenskarnas parti, waxaana taa sida ay noola muuqao u sabab ah in xisbigaan ku guulesytey dib u dhisitaan uu isku sameeyey. Xisbigaana sannadkan waxuu ku dadaalayaa doorashooyinka dalka ka dhaci doona, waxeyna kordhiyeen baahinta dhanbaaladooda iyo borobagaandadooda, aad ayeyna isku abaabuleen illa iyo heer degmo, ayey tiri Anna-Sofie Quensel.
Svenska Motståndsrörelsen, oo booliiska nabad sugida ku tilmaamey urur nasiiste ah oo doonaya in uu hadefkiisa ku gaaro gacan ka hadal, ayaa sidoo kale kordhiyey dhaq dhaqaaqiisa intii lagu jirey sannadkii 2013, sida Expo laga soo xigtey. Xubno kamid ah ururkan ayey ahaayeen kuwii weerar u geystey mudaharaad looga soo horjeedey cunsuriyiinta oo ka dhacayey xaafadda Kärrtorp magaalada Stockholm bishii december sannadkii la soo dhaafey.
Isha: Expo, Ekot